Shaxda Adag Ee Arsenal Ay Kula Ciyaari Doonto Manchester City Kulanka Sabtida & Haddii Saxeexyadii Cusbaa Ciyaari Doonaan - Gool24.Net
Shaxda Adag Ee Arsenal Ay Kula Ciyaari Doonto Manchester City Kulanka Sabtida & Haddii Saxeexyadii Cusbaa Ciyaari Doonaan
Arsenal ayaa Sabtida u tegi doonta Manchester City oo ay marti ugu noqon doonto garoonka Etihad Stadium, iyadoo ku hubaysan xiddigaha cusub ee ay xagaagan lasoo saxeexatay.
Kulankii iskugu dambeeyey ee horyaalka Premier League ee labadan kooxood dhex maray, waxa guul-darro weyn oo 3-0 ah loosoo xambaariyey Arsenal taas oo ay kaga soo aargoosteen semi-finalkii FA Cup oo ay Gunners guul raaxo leh ka gaadhay City.
Mikel Arteta ayaa markii saddexaad ka hor tegaya Pep Guardiola oo uu tababare ku-xigeen ugu ahaa Man City, waxaanu markan doonayaa inuu guushii labaad kasoo gaadho, taas oo noqonaysa middii ugu horreysay ee horyaalka Premier League ah maadaama kooxdiisa laga adkaaday kulankii hore ee horyaalka.
Arsenal ayaa afartii kulan ee Premier League ee xili ciyaareedkan, waxay lasoo kulantay hal guul-darro oo ahayd middii ay Liverpool sida xun ugu karbaashtay laakiin saddexdii ciyaarood ee kale ayay soo wada badisay, waxaanay haystaan sagaal dhibcood, halka Manchester City ay dhibaataysan tahay oo guul-darro xanuun badan iyo barbarro ka dambeeyey ay iskugu xigeen.
Tababare Mikel Arteta ayaa rajaynaya in ciyaarta Man City ee Sabtida uu diyaar u noqon doono Thomas Partey oo la rumaysan yahay inuu wax badan ka beddeli doono khadka dhexe ee kooxda oo uu habayn doono kubbadihii sida fudud ku lumi jiray iyo goolashii badnaa ee sida sahlan looga dhalinayay oo uu joojin doono.
“Waxay ila tahay in Partey uu noo ogolaan doono inaanu qaabab cusub ku ciyaarno oo uu ku habboonaan doono qaababkaas oo uu boosas kala duwan ka ciyaari doono, taas oo ah wax u wanaagsan kooxda.” Ayuu yidhi Arteta oo ka hadlayay Thomas Partey oo maanta lagu soo bandhigay Emirates.
Laacibkan ay £45 milyan ee Gini sida qasabka ah ugaga soo qaateen Atletico Madrid oo isku dhejinaysay, isla markaana bixisay dhamaan lacagtii lagu burburinayay heshiiskiisa, waxa uu Arteta siinayaa inuu ku ciyaaro shax ka kooban 3-4-3 oo uu awoodda saari doono khadka dhexe iyo weerarka, taas oo u sahli karta inuu wiiqo awoodda Manchester City.
Thomas Partey marka uu khadka dhexe yimaaddo, waxa uu Arteta dooran doonaa laacibiintii uu kusoo lamaanaysiin lahaa, iyadoo difaacana ay wadaagayaan Gabriel Magalhaez iyo David Luis oo lagu darayo Holding, halka uu Saka uga faa’iidaysanayo khadka dhexe.
Dhexda ayaa Partey ay garab istaagi doonaan Ceballos, Saka iyo Bellerin oo dhinac noqon doona, halka weerarkana ay Lacazette, Willian iyo Aubameyang abuuri doonaan khatar jabisa difaaca Manchester City.
Halkan kaga bogo shaxda suurtogalka ah ee Arsenal kula ciyaari doonto Manchester City: